Simudza Vagadziri & Vatengesi | China Boom Simudza Fekitori
Simudza Boomchigadzirwa chikuru mumhepo indasitiri yebasa iyo inosanganisira yekukweva boom kusimudza, unozvigadzirira wega yakadomwa boom kusimudza uye telescopic inozvigadzirira boom kusimudza. Daxlifter's China towable boom lift ine kushandiswa kwakawanda: , self propelled boom lift, aluminium lift uye imwe yemuchadenga yebasa chikuva zvese zvinoda kutakurwa nerori hombe kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Wide inoshanda renji: dzakasiyana nesikisi kusimudza, aluminium lift uye imwe vetical lift, towable boom lift haigone kungoshanda pakatarisana chete asi zvakare inogona kusvika yakatwasuka kure kubva 5.2m kusvika 9.5m.
Iyo inodhonzwa boom kusimudza ndeimwe yezvigadzirwa zvedu zvikuru. Iyo ine yakakwirira yekukwira kukwirira, hombe yekushanda renji, uye ruoko runogona kupetwa pamusoro pezvipingamupinyi zviri mudenga.Max Platform kukwirira kunogona kusvika 16m ine 200kg kugona.
Yako wega inofambiswa yakataurwa boom kusimudza inogona kuchinjika kune yakatarwa yekushandira nharaunda yeiyo ngarava. Iyo chikuva inofamba uye boom kutenderera inofanirwa kuve yakagadzirirwa nemabhureki akavimbika kuti ive nechokwadi chekutonga kwakatendeka panzira uye panguva yekushanda.
Daxlifter Kuzvifambisa Yakanongedzwa Boom Simudza ine bhatiri simba chinhu chinogadzirwa mune yedu yekugadzira katarogu. Zvikuru zvakanakira ndezvekuti iyo yakataurwa boom inogona nyore kuburikidza nechipingaidzo chiri mudenga.
Self Propelled Telescopic Boom Simudza nedhiziri simba rakakodzera kushandiswa munzvimbo hombe dzekuvaka, nzvimbo dzekutakura ngarava, kuvaka zambuko nemamwe mapurojekiti, nekufamba kusingaenzanisike uye kugona basa kwakaringana. Ehe, mutengo wayo unenge wakakwira.
Kuzvifambisa wega Telescopic Boom Simudza
Iyo yakakosha yakakosha poindi yeYoga inokwenenzverwa telescopic boom kusimudza ndeyekuti inogona kusvika pakakwirira kudaro papuratifomu kukwirira kuenzaniswa nehurefu hwakafambiswa yakataurwa boom kusimudza.Ordinary modhi max inogona kusvika pamusoro pemakumi mana emamita chikuva kukwirira, Yakanakisa maitiro modhi inogona kusvika 58m chikuva kukwirira.
Yese yekushanda hasha inoita kuti ive yakakodzera kune echokwadi marudzi eiyo Wordking mamiriro. Dhizaini Yakakosha dhizaini inogona kushandiswa zvese kunze nekunze.Uye kune zvakawanda zvakanakira yedu inodhonzwa yakadomwa boom kusimudza, chiGerman AL-KO Retractor ine yekupaka mabhureki uye inertia brake. Dismountable Dhonza Rod yekufambisa zviri nyore uye kurodha mudziyo. Hydraulic mafuta tangi ine filtration sisitimu: ese ari maviri ekupinda kwemafuta uye kubuda kwemafuta zvakagadzirwa nesitirita, kumanikidza gage hakuzove 0 futi kamwe kusachena block mafuta-nzira.